के हो सिँजा सभ्यता ? — Breaking News, Headlines & Multimedia
डिल्लीप्रसाद तिवारीआश्विन २४, २०७८जुम्ला
केही वर्ष अघिदेखि सिँजा सभ्यताको विषयमा कुरा उठ्न थालेका छन् । कहिले देउडा खेल र जात्रामा सिँजा सभ्यताका विषय उठ्छन् त कहिले आमासभा र कार्यक्रमहरुमा । कतै सिँजा सभ्यताका नाममा संस्था दर्ता भएका छन् भने संग्रहालय स्थापनाका लागि कामहरु थालनी भएका छन् । स्थानीय चुनाव पछि सिँजा क्षेत्रमा राष्ट्रियस्तरका उच्च राजनितिक तथा पदाधिकारी नेतृत्वहरुबाट भ्रमणहरु भएका छन् । नेपाली काँग्रेसका बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, त्यसबेलाका एमालेका बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सिँजा गाउँपालिकाबाट र उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन र कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले कनकासुन्दरी गाउँपालिकाबाट सिँजा सभ्यताको संरक्षण र विकासका विषयमा बोलेका छन् ।
जुम्लाका संघीय सांसदसँग राष्ट्रिय सभाका विषयगत समितिका दश जनाको टोली पनि सिँजा क्षेत्रमा आएर अन्तरक्रिया गरेको छ । कर्णाली प्रदेशका पूर्व कानुनमन्त्रीले सिँजा सभ्यताको संरक्षण तथा विकासको विषयमा प्रदेश सभामा विधेयक दर्ता गराएका छन् । एकातिर सिँजा सभ्यताका विषयमा यसरी राष्ट्रिय, प्रदेश स्तरीय र स्थानीय तहबाट आवाजहरु उठिरहेका छन् । तर हामी सिँजा क्षेत्र तथा सिँजा सभ्यतालाई माया गर्नेहरुबाट परिणाममुखी कार्यको लागि पहल भएको देखिदैन । सिँजा क्षेत्रको अपनत्व लिने हिमा, सिँजा, र कनकासुन्दरी गाउँपालिकाहरुले आफ्नो कार्यकाल सकिनै लाग्दा पनि आपसी समन्वय र विकासको पहल गर्न सकेनन् ।
सिँजा सभ्यताको संरक्षण र विकासका विषयमा सिङ्गो देश तातिरहेका बेला हाम्रा स्थानीय तहहरु बाटो खन्न र कुलो बनाउनमा मात्र सिमित हुनुले यो महत्वपूर्ण अवसर गुम्ने खतरा पैदा भएको छ । आखिर हाम्रा स्थानीय तहहरु किन उदासिन भएका छन् ? मेरो विचारमा कि त स्थानीय तहहरुलाई सिँजा सभ्यताको महत्वलाई कम आँकेका छन् या त यिनीहरुमा सीमित आफ्नो पेरिफेरी नै सिँजा सभ्यता हो भन्ने भ्रम छ । सम्पूर्ण नेपाली भाषीको जनजीवनसँग गाँसिएको सिँजा सभ्यताका विषयमा कम जानकारी भएर महत्व नबुझिनु पनि राम्रो मानिदैन । किनभने समय निकै घर्किसकेको छ ।
सिँजा सभ्यतालाई एउटा गाउँको सीमित भूगोलमा कैद गर्न खोजिनु पुरानो सिँजाली मल्ल राजाको दरवार ठड्याउन खोज्नु हो । हामीलाई धाडो परेर एक रातमा एक गाउँ नै लुटी दरबारमा लगेर मासुभात खाने त्यो पिडक र आततायी दरबार ब्युताउन खोज्नु हाम्रा लुटिएका पुर्खाको अपमान हो । यो कुनै पनि हालतमा राम्रो होइन । हामीलाई सिँजा सभ्यता चाहिएको हो । सिँजा सभ्यता भित्र शासक आउन सक्छ । तर भूमिकामा सिँजा सभ्यताको विकासमा योगदान दिएका हाम्रा समग्र पुर्खाहरु अटाउनु पर्दछ ।
सभ्यता भन्नाले निश्चित समूदाय वा भूगोलमा छरिएर रहेका मानिसहरुको प्रभावकारी र विकसित जीवनशैलीलाई बुझाउछ । तुलनात्मक रुपमा उच्च साँस्कृतिक र प्राविधिक विकास भएको अवस्थालाई सभ्यता भनिन्छ । विश्वका प्राचीन तर प्रसिद्ध दशवटा सभ्यताहरु जसले मानव समाजलाई तुलनात्मकरुपमा विकसित र गुणस्तरीय बनाउन मद्दत गरेका थिए । टर्की, ग्रीस र सिरियाको बीचमा विकसित भएको मेसोपोटानियाको सभ्यता, पाकिस्तान, अफगानिस्तान र हिन्दुस्तानको बीचमा विकसित भएको सिन्धु घाँटी वा इन्दुजको सभ्यता, इजिप्टको सभ्यता, ग्वाटेमाला र साल्भाडोरको माया सभ्यता, पँहेलो नदीको आसपासबाट विकसित भएको चिनिया सभ्यता, ग्रीक र पर्सियन सभ्यता, रोमन सभ्यता, मेक्सिकोको अजटेक सभ्यता र पेरुको इनकान सभ्यताहरुले छरिएर रहेका मानव बस्तीहरुलाई व्यवस्थित र तुलनात्मकरुपमा उच्च बनाएका थिए ।
एघारौ शताब्दीमा खारी प्रदेशबाट आएका नागराजले सिँजामा राज्य स्थापना गरेपछि सिँजा सभ्यताको पृष्ठभूमि तयार भएको मानिन्छ । इतिहासकार बालकृष्ण पोखरेलले खस राज्यको इतिहास भन्ने पुस्तकमा मुसलमानको आक्रमणबाट बच्न भारतको करतारपुरबाट भागेर खारीका राजाको शरणमा आएका करतारपुरे राजाहरुले राजकुमारीलाई भेटी चढाएपछि नागराज र करतारपुरे राजाहरु सिँजा उपत्यकामा आई राज्य स्थापना गरेको कुरा उल्लेख गरेका छन् । सिँजा राज्यमा चल्ल र मल्लहरुले राज्य गरिरहँदा सिन्धु सभ्यता बोकेर आएका करतारपुरे र पहेलो नदीको चिनियाँ सभ्यता बोकेर आएका नागराजले संयुक्तरुपमा राज्य सञ्चालन गरी मिश्रित सँस्कृतिको विकास गरेको देखिन्छ ।
इन्दुज सभ्यताले दिएका महत्वपूर्ण उपलब्धिहरु मध्ये गहनाहरु, कुवा, पिङ, धारा, ढल निकास, कटन उद्योग, रंगहरु, ढुङ्गा र ईटाहरु, मैदान वा रंगशालाहरु, पत्थरहरु, खाने तेल, पश्मिना आदि महत्वपूर्ण मानिन्छन् । त्यसैगरी चिनियाँ सभ्यताले कागज, चङ्गा, सियो, रक्सी, रेशम, रेशममार्ग, कम्पास, फलाम, स्टिल, बारुद, पाङ्ग्रा, पानी घट्ट, ग्रेटवाल, सिस्मोग्राफ, हलो, इनार, माटाका भाँडाहरु आदिको आविस्कार गरेर जनजीवन सहज बनाएको देखिन्छ ।
सिँजा सभ्यता सिन्धुघाँटी वा इन्दुज सभ्यता र चिनिया सभ्यताको प्रभावका बीच विकसित भएको सभ्यता हुँदा पनि सिँजा सभ्यतालाई सिँजाको माटोको सभ्यता, पानीको सभ्यता र सिँजाको बिरुवाको सभ्यताबाट खोजी गर्नुपर्ने हुन्छ ।
सिँजा र माटोको सभ्यता
पृथ्वीको माथिल्लो तह माटो हो । माटोलाई मुख्यतया प्रकृति र कृषिसँग जोडेर हेर्ने गरिएको पाइन्छ । कृषि माटोले संस्कृति, सभ्यता र जनजीवनलाई जन्माउछ । यसैबाट सिर्जना, प्रविधि र साहित्यको विकास हुन्छ । वास्तवमा संस्कृति माटोमा गरिने खेती हो । बीउको तयारी देखि रोपाई, गोडाई, कटाई, सुकाई, चुटाई, कुटाई, पिसाईसम्मका क्रियाकलापहरु, बास र कपासका लागि प्रयोग गरिने प्रविधि, ज्ञान, कला, सीप, आदि माटोसँग जोडिएका छन् ।
मानिसको प्रभावकारी जीवनशैली पनि उत्पादन, प्रविधि, अवसर र अधिकारमा सीमित हुन्छ । जुन अन्त्यमा माटोसँग जोडिन्छ । माटोसँग आत्मादर्शन, धर्म, भाषा, साहित्य, स्वास्थ्य र नैतिकता जोडिएको हुन्छ । माटोको नष्टतासँगै उत्पादन प्रणाली अवरुद्ध हुन्छ । सभ्यताको विनास हुन्छ । सिँजा सभ्यता माटोसँग जोडिएको सभ्यता हो । गाँस, बास र कपासबाहेक जन्म, विवाह, मृत्यू लाई पनि माटोसँग जोडेर सिँजा सभ्यताको खोजी गरिनुपर्छ ।
सिँजा क्षेत्रमा अन्न उत्पादन र प्रयोग गर्दाका प्रविधि, सिप, कला, ज्ञान र समन्वयले सभ्यता तथा भाषाको उत्पति र साहित्यको प्रारम्भ भएको हो । त्यसैले सिँजाली भाषिका वा हालको नेपाली भाषा र सभ्यताको विकास समग्र सिँजा राज्यमा भएको हो । त्यसबेलाको सिँजा राज्यको राजधानी सिँजा र दुल्लुमा भएकाले लिखित प्रमाणका रुपमा शिलालेखहरु सिँजा र दुल्लु क्षेत्रमा भेटिएका मात्र हुन् । त्यसैले सिँजा सभ्यता जस्तो वृहत विषयवस्तुलाई कुनै सिमित घेरामा राखेर खोजे यसको सही नतिजा निस्किने छैन । सिँजा सभ्यतालाई जति फराकिलो गरी हर्ने प्रयास गरिन्छ त्यति नजिक पुग्न सकिन्छ ।
सिँजा र पानीको सभ्यता
जसरी पानी बिना जीवन संभव छैन त्यसरी नै जीवन बिना सभ्यताको कल्पना गर्न सकिदैन । सभ्यता माटोबाट टुसाउछ । माटो पनि कृषि कार्यबाट रंगिएर जीवनका रंगहरुमा परिणत हुन्छ । कृषिको निर्भरता पानीमा रहने भएकाले सिँजा सभ्यताको खोजी पानीको सभ्यताबाट खोजिनुपर्छ । सिँजा सभ्यताको जलप्रवाह प्रणाली, जलचरको शिकार प्रणाली, जलको प्रयोगबाट भएको प्रविधिको विकास र जीवनस्तरमा पारेको प्रभाव, जलबाट उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रणका उपायहरु, जल पारवहनका लागि गरिएका उपायहरु, जलसँग जोडिएका आस्था र धर्म तथा विश्वास आदि खोजीको विषय हुनुपर्छ ।
सिँजा र बिरुवा सभ्यता
सिँजा सभ्यताको खोजीको अर्को पाटो बिरुवा सभ्यता हो । यो सिँजा सभ्यताले परम्परादेखि पर्यावरणीय सन्तुलन तथा पारिस्थितिक प्रणालीलाई बचाउन गरिएका उपायहरुको खोजीबाट गरिनुपर्छ ।
मानिस मरेपछि पिपल रोप्नु, थानहरु र मन्दिरहरुमा देवदार, खरी, चन्दन, ओखर आदिका रुख रोप्नु, चौतारामा वरपिपल रोप्नु र पानीको धारा बनाउनु, बिरुवा सभ्यताका उदाहणहरु हुन् । माटो सुहाउदो अन्नबाली, दालबाली, तेलबाली, फलफूल आदिका बिरुवा तथा बीउ ल्याउने र खेती सिकाउने व्यक्तिलाई पूजा गर्नु र देवतासमान कदर गर्नु सिँजाका बिरुवा सभ्यताका केही उदाहरणहरु हुनसक्छन् ।
हामीले सिँजा सभ्यताले शताब्दीऔंै अघिदेखि छोडेर गएका कला, ज्ञान, सीप, प्रविधिको समय अनुसार नवीकरण, परिमार्जन र सुधार गर्न सकेनौं । मौलिक र स्तरीय नौलोपन दिन सकेनौं । अर्को तिर त्यसैलाई पनि जोगाएर राख्न सकेनौं । कसैका आयतित कला, सीप, प्रविधि र ज्ञानको उपयोगले माटो सुहाउदो आशातीत परिणाम आउन सकेन । त्यसर्थ, समग्र सिँजा सभ्यताको विशेष प्रभाव क्षेत्र कर्णाली प्रदेश परनिर्भर र आर्थिक, सामाजिक, बौद्घिक तथा स्वास्थ्यका दृष्टिकोणबाट झन्झन् कमजोर हुदै गइरहेको परिप्रेक्ष्यमा यसको संरक्षण र विकास गर्न ढिलो गर्न हुँदैन ।
फोटो स्रोतः कर्णाली पिपुल्स एण्ड प्लेस २०२० र विभिन्न सामाजिक सञ्जालबाट ।